လိုငျလီ ကို ခကျခကျခဲခဲ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျ မှ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ကောငျးကှကျ ၊ အားနညျးခကျြ တခြို့ ကို သုံးသပျ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ #လမျးပတျ - SPORTS MYANMAR
လိုငျလီ ကို ခကျခကျခဲခဲ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျ မှ ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ ကောငျးကှကျ ၊ အားနညျးခကျြ တခြို့ ကို သုံးသပျ ပွောဆိုလိုကျတဲ့ #လမျးပတျ
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ယနေ့ မနကျ က ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု ပှဲစဉျ မှာ လိုငျလီ အသငျး ကို အဝေးကှငျး မှာ ၁ – ၂ နဲ့ အနိုငျ ရခဲ့ပမေယျ့ ကစားပုံ နဲ့ စှမျးဆောငျရညျ အပိုငျး ကတော့ အားရစရာ သိပျမရှိခဲ့တာ ကို တှခေဲ့ရပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ ခံစဈပိုငျး က set-piece ဘော တှကေနေ ပေးဂိုး တှေ ဆကျလကျ ခှငျ့ပွု နရေတာ ကို တှခေဲ့ ရပါတယျ ။
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ဒီ ရာသီ မှာ မွနျနှုနျးမွငျ့ တိုကျစဈ ဆနျဆနျ ကစားဟနျ ကို အသုံးပွု နတောကွောငျ့ တိုကျစဈ အတှကျ မကွာခဏ ဆိုသလို အခှငျ့အရေးကောငျး တှေ မြားစှာ ရရှိ နပွေီး တဖကျ မှာ တိုကျစဈ အရမျး ဖှငျ့ကစားတဲ့ ဆိုးကြိုး တခု ဖွဈတဲ့ တနျပွနျ တိုကျစဈ ကိုလညျး မကွာခဏ ဆိုသလို ခှငျ့ပွု နရေပါတယျ ။
ပှဲပွီး သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ မှာတော့ ခယျြလျဆီး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ က ကစားပုံ နဲ့ ရလဒျပိုငျး ကို ကနြေပျမှု ရှိနပေမေယျ့ ၊ တညျကနျဘော တှကေနေ ပေးဂိုး တှေ ခှငျ့ပွု နရေတာနဲ့ ပတျသကျပွီး သူ့ အနနေဲ့ ဆကျလကျ ပွုပွငျ သှားခငျြသေးကွောငျး ၊ ဒီ အနိုငျရလဒျ က ၄ငျးတို့နဲ့ ထိုကျတနျမှု ရှိကွောငျး ၊ အကယျဒမီ ကစားသမား ၆ ယောကျ အထိ ပါဝငျ ကစားနိုငျ ခဲ့တာကလညျး စပါယျရှယျ အခိုကျအတနျ့ ဖွဈခဲ့ကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ ။
လမျးပတျ က ” ကွီးမား တဲ့ ရလဒျ ? ဟုတျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော တို့ဟာ ဒီ အုပျစု အဆငျ့ ကို ကြျောဖွတျပွီး ခရီး အရှညျကွီး ကနျြပါသေးတယျ ။ ဗလငျစီယာ ကို အဖှငျ့ပှဲ မှာ အရေးနိမျ့ ခဲ့တာကွောငျ့ ဒီနေ့ ပှဲဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ပိုပွီး အရေးကွီး နခေဲ့ပါတယျ ။ လိုငျလီ အသငျး ဟာ ကစားရ ခကျခဲမှနျး ကြှနျတျော တို့ သိထားပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ အမွနျနှုနျး ၊ တနျပွနျ တိုကျစဈ က အတျောလေး အထငျကွီးစရာ ကောငျးပါတယျ ။ ”
” ကြှနျတျော တို့ရဲ့ ဒီနေ့ စှမျးဆောငျရညျ က ကောငျးခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ အစောပိုငျး ပှဲခြိနျ တှမှော ပှဲကို ထိနျးခြုပျ ကစား နိုငျခဲ့ပွီး လိုအပျတဲ့ အဖှငျ့ဂိုး ကိုလညျး ရယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ တညျကနျဘော တှကေတော့ အခု ထိ ကြှနျတျော တို့ အသငျး ရဲ့ အားနညျးခကျြ တခု အဖွဈ ဆကျရှိ နဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အတှကျ ကြှနျတျော တို့ ဆကျလကျ ကွိုးစား ရမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနေ့ ပှဲလို အဝေးကှငျး မှာ လာရောကျ ကစားပွီး ဒီလောကျ စှမျးဆောငျရညျ နဲ့ ကစားပုံ အတှကျ ကြှနျတျော တို့ ကနြေပျ သငျ့ပါတယျ ။ ”
” ဒီနေ့ နိုငျပှဲ ဟာ ကြှနျတျော တို့နဲ့ ထိုကျတနျမှု ရှိခဲပါတယျ ။ ဟုတျပါတယျ ။ ဒီနေ့ ပှဲမှာ အကယျဒမီ က လူငယျ ၆ ယောကျ အထိ ကစားခှငျ့ ရတာက တကယျ့ စပါယျရှယျ အခိုကျအတနျ့ ပါပဲ ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ ကလပျ တသငျး အနနေဲ့ ဒီလို အကယျဒမီ က လူငယျ တှေ စီနီယာ အသငျး မှာ အားဖွညျ့ ကစား ပေးနိုငျတာ ကို ကနြေပျ ဝမျးသာ ရမှာပါ ။ ပရိသတျ တှကေလညျး ဒါကို သဘောကြ နှဈသကျ ကွသလို ၊ ကလပျ ဖကျက ဒီ အနအေထား အတှကျ ပြျောရှငျ နပေါတယျ ။ ”
” လူငယျ ကစားသမား တှေ ဖကျကလညျး ပရိသတျ တှရေဲ့ အားပေးမှု ကို သူတို့ရဲ့ လုပျအား ၊ အသငျး အပျေါ ပေးဆပျမှု တှနေဲ့ အကောငျးဆုံး တုနျ့ပွနျ နကွေပါတယျ ။ ဒီနေ့ ပှဲဟာ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ကစားပုံ ကောငျးရုံတငျ မဟုတျပါဘူး ။ ဒီနလေို့ နိုငျပှဲမြိုး ရှလြေှ့ောကျ ရယူ ပွနိုငျဖို့ လိုပါတယျ ။ ကြှနျတျော တို့ဟာ အခြိနျတိုငျး မှာ အဖကျဖကျ က ခွစှေမျး တှေ တိုးတကျလာဖို့ ကွိုးစား နပေါတယျ ။ ”
” ဒီနေ့ ပှဲမှာ တဦးခငျြး စှမျးဆောငျရညျ အပိုငျး နဲ့ ပတျသကျပွီး အားရစရာ တခြို့ လညျး ရှိပါတယျ ။ ဥပမာ – ရိဈဂြိမျးဈ လိုပေါ့ ။ သူဟာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲထှကျခှငျ့ ကို စရခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ကစားပုံ က အရမျး တညျငွိမျမှု ရှိပါတယျ ။ ဒီနပှေဲ့ မှာ ကြှနျတျော ကစားကှကျ အပွောငျးအလဲ တခု လုပျခဲ့ပါတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျတျော တို့ဟာ ပှဲ အမြားကွီး ကစားရမှာ ဖွဈလို့ပါ ။ ”
” လူငယျ ခွတေကျ တှဟော ဒီနေ့ ညပှဲမှာ သူတို့ ဘာတှေ လုပျပွနိုငျလဲ ဆိုတာ အကောငျးဆုံး ပွသ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒါမြိုး ရှဆေ့ကျ ထိနျးသိမျး သှားနိုငျဖို့ လိုပါတယျ ။ ခနျြပီယံလိဂျ အဆငျ့အတနျး ဖွဈတာကွောငျ့ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ဒီနေ့ ညပှဲဟာ အရမျး ခကျခဲ ခဲ့ပါတယျ ။ ဒီလို အနအေထား မှာ ဒီ လူငယျ အစုအဖှဲ့ ဟာ ပုံစံကောငျး တှေ ပွသ နိုငျခဲ့ပါတယျ ။ ဒီထကျ ပိုကောငျးတဲ့ ပုံစံ တှကေိုလညျး သူတို့ ထပျပွ နိုငျပါသေးတယျ ။ ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ ။
လိုင်လီ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် မှ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ကောင်းကွက် ၊ အားနည်းချက် တချို့ ကို သုံးသပ် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ယနေ့ မနက် က ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ် မှာ လိုင်လီ အသင်း ကို အဝေးကွင်း မှာ ၁ – ၂ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပေမယ့် ကစားပုံ နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်း ကတော့ အားရစရာ သိပ်မရှိခဲ့တာ ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ခံစစ်ပိုင်း က set-piece ဘော တွေကနေ ပေးဂိုး တွေ ဆက်လက် ခွင့်ပြု နေရတာ ကို တွေ့ခဲ့ ရပါတယ် ။
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ဒီ ရာသီ မှာ မြန်နှုန်းမြင့် တိုက်စစ် ဆန်ဆန် ကစားဟန် ကို အသုံးပြု နေတာကြောင့် တိုက်စစ် အတွက် မကြာခဏ ဆိုသလို အခွင့်အရေးကောင်း တွေ များစွာ ရရှိ နေပြီး တဖက် မှာ တိုက်စစ် အရမ်း ဖွင့်ကစားတဲ့ ဆိုးကျိုး တခု ဖြစ်တဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ် ကိုလည်း မကြာခဏ ဆိုသလို ခွင့်ပြု နေရပါတယ် ။
ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် က ကစားပုံ နဲ့ ရလဒ်ပိုင်း ကို ကျေနပ်မှု ရှိနေပေမယ့် ၊ တည်ကန်ဘော တွေကနေ ပေးဂိုး တွေ ခွင့်ပြု နေရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ အနေနဲ့ ဆက်လက် ပြုပြင် သွားချင်သေးကြောင်း ၊ ဒီ အနိုင်ရလဒ် က ၄င်းတို့နဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိကြောင်း ၊ အကယ်ဒမီ ကစားသမား ၆ ယောက် အထိ ပါဝင် ကစားနိုင် ခဲ့တာကလည်း စပါယ်ရှယ် အခိုက်အတန့် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
လမ်းပတ် က ” ကြီးမား တဲ့ ရလဒ် ? ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တို့ဟာ ဒီ အုပ်စု အဆင့် ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ခရီး အရှည်ကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ။ ဗလင်စီယာ ကို အဖွင့်ပွဲ မှာ အရေးနိမ့် ခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့ ပွဲဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ပိုပြီး အရေးကြီး နေခဲ့ပါတယ် ။ လိုင်လီ အသင်း ဟာ ကစားရ ခက်ခဲမှန်း ကျွန်တော် တို့ သိထားပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အမြန်နှုန်း ၊ တန်ပြန် တိုက်စစ် က အတော်လေး အထင်ကြီးစရာ ကောင်းပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ဒီနေ့ စွမ်းဆောင်ရည် က ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ အစောပိုင်း ပွဲချိန် တွေမှာ ပွဲကို ထိန်းချုပ် ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့ အဖွင့်ဂိုး ကိုလည်း ရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ တည်ကန်ဘော တွေကတော့ အခု ထိ ကျွန်တော် တို့ အသင်း ရဲ့ အားနည်းချက် တခု အဖြစ် ဆက်ရှိ နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ဆက်လက် ကြိုးစား ရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ပွဲလို အဝေးကွင်း မှာ လာရောက် ကစားပြီး ဒီလောက် စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ကစားပုံ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ကျေနပ် သင့်ပါတယ် ။ ”
” ဒီနေ့ နိုင်ပွဲ ဟာ ကျွန်တော် တို့နဲ့ ထိုက်တန်မှု ရှိခဲပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ပွဲမှာ အကယ်ဒမီ က လူငယ် ၆ ယောက် အထိ ကစားခွင့် ရတာက တကယ့် စပါယ်ရှယ် အခိုက်အတန့် ပါပဲ ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ကလပ် တသင်း အနေနဲ့ ဒီလို အကယ်ဒမီ က လူငယ် တွေ စီနီယာ အသင်း မှာ အားဖြည့် ကစား ပေးနိုင်တာ ကို ကျေနပ် ဝမ်းသာ ရမှာပါ ။ ပရိသတ် တွေကလည်း ဒါကို သဘောကျ နှစ်သက် ကြသလို ၊ ကလပ် ဖက်က ဒီ အနေအထား အတွက် ပျော်ရွှင် နေပါတယ် ။ ”
” လူငယ် ကစားသမား တွေ ဖက်ကလည်း ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု ကို သူတို့ရဲ့ လုပ်အား ၊ အသင်း အပေါ် ပေးဆပ်မှု တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန် နေကြပါတယ် ။ ဒီနေ့ ပွဲဟာ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ကစားပုံ ကောင်းရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီနေ့လို နိုင်ပွဲမျိုး ရှေ့လျှောက် ရယူ ပြနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ဟာ အချိန်တိုင်း မှာ အဖက်ဖက် က ခြေစွမ်း တွေ တိုးတက်လာဖို့ ကြိုးစား နေပါတယ် ။ ”
” ဒီနေ့ ပွဲမှာ တဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားရစရာ တချို့ လည်း ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ – ရိစ်ဂျိမ်းစ် လိုပေါ့ ။ သူဟာ ကစားသမား ဘဝ ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲထွက်ခွင့် ကို စရခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကစားပုံ က အရမ်း တည်ငြိမ်မှု ရှိပါတယ် ။ ဒီနေ့ပွဲ မှာ ကျွန်တော် ကစားကွက် အပြောင်းအလဲ တခု လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ဟာ ပွဲ အများကြီး ကစားရမှာ ဖြစ်လို့ပါ ။ ”
” လူငယ် ခြေတက် တွေဟာ ဒီနေ့ ညပွဲမှာ သူတို့ ဘာတွေ လုပ်ပြနိုင်လဲ ဆိုတာ အကောင်းဆုံး ပြသ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါမျိုး ရှေ့ဆက် ထိန်းသိမ်း သွားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ချန်ပီယံလိဂ် အဆင့်အတန်း ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဒီနေ့ ညပွဲဟာ အရမ်း ခက်ခဲ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလို အနေအထား မှာ ဒီ လူငယ် အစုအဖွဲ့ ဟာ ပုံစံကောင်း တွေ ပြသ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံ တွေကိုလည်း သူတို့ ထပ်ပြ နိုင်ပါသေးတယ် ။ ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။